Madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho ku tegay dalka Burundi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Bujambura – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo socdaal ku marayay qaar ka mid ah dalalka ay ciidamada ku howlgalaya magaca AMISOM ee joogo Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Bujambura ee caasimadda dalka Burundi.
Waxaana garoonka caalamiga ah ee Bujambura si weyn ku soo dhaweeyey Madaxweyne ku xigeenka dalka Burundi, Gervais Rufyikiri, danjiraha Soomaliya u fadhiya Burundi Amb. Abshir Xasan Abshir saraakiil sar sare oo ka tirsan wasaarada gaashandhigga, safiirka Burundi u fadhiya Soomaaliya safaarado kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Masar, Libya,Rwanda,Kenya,Tanzania iyo Nigeria.
Madaxweyne ku xigeenka dalka Burundi ayaa ugu horeyn munaasbaada ku soo dhaweeyey Madaxweynaha DFS iyo wafdigiisa, isagoo ku hadlayey magaca shacabka iyo dowlada Burundi waxaa uu u hambalyeey madaxweynaha sida uu didhibada u taagay astaanta qaranka soomaaliyeed kana hirgaliyey wadanka gudihiisa horumar baaxada leh nabadgaliyo iyo diimuquradiyad.
Madaxweynha D.F Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa dhankiisa u mahad celiyey Dowlada Burundi iyo shacabkaba soo dhaweynta qaaliga ah ay u sameeyeyn.
Madaxweynaha ayaa waxaa uu xusay in sheyga ugu qaalisan nolosha ay tahay qofka naftiisa kuu huro, isagoo ula jeeda ciidanka Burundi ee ka garab dagaalamaya ciidanka Soomaaliyeed ee wada howlgalada Alshabaab looga saarayo qeybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya.
Sidoo kale, madaxweynaha waxaa uu xusay in dowlada Burundi iyo shacabkeedaba ay ka mid yihiin dalal kooban oo fahansan qadiyada Soomaaliyeed diyaarna u ah in ay taageeraan calanka Soomaaliyeed.